Nlekọta Mgbasa Mgbasa Ozi bụ Must! | Martech Zone
Enwere otutu ụka banyere mgbasa ozi mmekọrịta (gụnyere ịde blọgụ) na ma a ga-atụle nsonaazụ ya na otu esi.
Examplefọdụ ihe atụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-agụnye oku iji mee ihe na blọọgụ ụlọ ọrụ, mmelite (ma ọ bụ mbenata) na afọ ojuju ndị ahịa, ma ọ bụ nwekwuo ndị ahịa njigide.
Ndị na-emegide mmekọrịta mgbasa ozi na-elekọta mmadụ mgbe ụfọdụ kwenyere na nha bụ ụzọ mbibi, ma ọ bụ ọ dịkarịa ala nhazi. Ha kwenyere na azụmaahịa kwesịrị imezu atụmatụ nkwukọrịta na ndị ahịa na atụmanya n'ihi na ọ bụ ya nri ihe a ga-eme. Ekwenyere m na ọ bụ ihe ziri ezi ịme… na anyị kwesịrị tụọ mgbasa ozi mmekọrịta iji gosi ọ bụ ihe kwesiri ime!
Ihe ize ndụ nke mmesho, n'ezie, na-atụ ihe ezughi ezu ma ọ bụ na-adabere na nkwubi okwu na ezughi oke data. Ọ bụrụ na ị na-esepụta ihe abụọ na-agbanwe agbanwe ma ị ga - ahụ njikọta, nke ahụ apụtaghị na ị ga - egosi na enwere otu. Enwere ike inwe mgbanwe gburugburu ebe obibi ọzọ nke ka sie ike karịa is ihe na-efunahụ gị.
Ndị na-akwado ịtụ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-agbakarị ihe mmadụ na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi, ma na-ahụ ya dị ka usoro ọhụụ iji dozie ma na-achịkwa. M emela kwenye na nke a. Ekwenyere m na ọ bụ usoro ọzọ iji mejupụta ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ iji wepụta ngwaahịa ha nye ndị chọrọ ma ọ bụ chọrọ ha.
Mgbe m gụrụ post a chefuo mgbasa ozi mgbasa ozi Agwara m, n'eziokwu, na arụmụka ya bụ isi okwu. Ulo oru a adighi eche ihe m chere ma obu echiche gi gbasara ihe mgbasa ozi nke ndi mmadu… ha ga-atụle n'agbanyeghị.
Mmetụta mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na-esi ike, mana ọ gaghị ekwe omume. Echere m na ọtụtụ n'ime arụmụka ahụ sitere n'eziokwu bụ na ịlele mmetụta ọ chọrọ ịrụsi ọrụ ike. Gbaa mbọ hụ na enwetara onye ọbịa ọ bụla na ihe omume ha metụtara ngwaahịa na ọrụ gị abụghị ọrụ dị mfe… yabụ uche m na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ mgbasa ozi na-aghọtaghị etu ha, aghọtaghị ihe kpatara ya, ma ọ bụ dị nnọọ umengwụ.
Ha achọghị ịkọkọ ọnụahịa ngwaahịa, afọ ojuju ndị ahịa, echiche ngwaahịa na ọnọdụ niile, mbata inbound, uru njikọ aka, oke nso, na akụ mmadụ na-efu gị… ọ dị mfe ikwu maka ole Mmasị i nwetara, ihe ị kwuru ma ọ bụ kpọtụrụ aha na saịtị ndị ọzọ. Jisie na ị na-etinye ụlọ ọrụ na nnukwu atụmatụ mmefu ego na usoro mgbasa ozi ọha na eze na-enweghị ịgwa ha otu esi tụọ ihe ịga nke ọma na dollar na cents.
Anyị ga-atụle. Anyị ga-egosi. Anyị ga-emeziwanye.
Itinye ihe mgbaru ọsọ na usoro na Social Media apụtaghị na ịkwesịrị ịhapụ àgwà ndị ọzọ metụtara mmetụta nke azụmaahịa na-eji ndị na-elekọta mmadụ eme ihe iji bulie nsonaazụ azụmaahịa. Vingkwalite nkwukọrịta n'etiti ndị ahịa na atụmanya, na-enye ụzọ maka itinye aka, na-eme ka ikike ụlọ ọrụ gị nwee ohere, ịchọta ndị na-eme ihe ike na ikwe ka ha gbasaa okwu a. Can nwere ike ịnweta ụwa kachasị mma.
Enwere m ntụkwasị obi dị egwu n'ọchịchọ ebumpụta ụwa nke ịgbanye ụlọ ọrụ ndị ga-anwa ịchịkwa ndị a na-ajụ ajụ. Mmesho agagh enye ndi ulo oru nghota banyere nloghachi na itinye aka na mgbasa ozi ndi mmadu, mmesho genye ndi kompeni ihe n’egosi na eziokwu na uzo gh’eme. Ike dị na ọnụọgụgụ. Ekwenyekwara m na teknụzụ azụmaahịa ga-aga n'ihu na-akawanye mma ka ịlele ndị na-ajụ nkwukọrịta ọhụụ a ga-adị mfe ma zie ezi.
Otu echiche, naanị n'ihi na ị gosipụtara mgbasa ozi mmekọrịta dị ka atụmatụ ịzụ ahịa ahịa nwere ike apụtaghị na ụlọ ọrụ ga-enubata na ya. Ndị ụlọ ọrụ bụ ụgbọ mmiri siri ike ịtụgharị! Anyị na-ekwukarị ụlọ ọrụ maka ịta otu ibe otu oge, gosipụta nsonaazụ ya, wee rụọ ọrụ iji bulie mmemme ha. Mgbanwe siri ike ma were oge.
Okwu oma. Etinyewo m ọtụtụ ihe n'ime ya nwere ike ịbụ ọrịa. Nnwale. Tụọ. Nnwale. Tụọ. Ka oge na-aga, mgbalị SM gị ga-eji nwayọ nwayọ.
Daalụ maka aha blog m, Digital Marketing Inner Circle na post gị. Obi ụtọ maka aha na ga-elele na gị blog .. ụfọdụ oké posts.
Enwere m ike ikwu okwu n'ụzọ ahụ n'ụzọ na-ezighi ezi. Know maara na enwere m okwu ahụ mgbe ụfọdụ. ha. Isi okwu nke post a bụ ịjụ ma ọ bụrụ na anyị na-agbaso Ydị ziri ezi nke nha ọ bụchaghị ileghara nha anya na nke ya.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịlele ihe dị ka ihe a na-apụghị ịhụ anya dị ka akara na imepụta… ọ ga-ekwe omume ka anyị tụọ mgbasa ozi mmekọrịta dịka ụdị mmepe mmepe. Ekwenyere m na ụlọ ọrụ bụ ụgbọ mmiri siri ike ịtụgharị. Redio abụrụla ụdị ahịa egosipụtara kemgbe ọtụtụ afọ ma ọ ka siri ike ree ụfọdụ ndị na ngwaọrụ ahụ.
O nweghi ihe jikọrọ ya na oke ọrụ ọ ga-eji tụọ akụrụngwa. I kwesiri ima nke a site ugbu a. Ọ nwere ihe ọ bụla metụtara ihe ngwaọrụ iji.
Echere m na anyị niile na-anwa igosipụta usoro na ngwaọrụ ugbu a.
Ọ bụ ihe ịma aka n'ezie - ọkachasị ka ndị ahịa anyị na-ahụ mmefu ego ha ka ha na-achịkwa micro-ma belata aka ekpe na aka nri. Ana m atụ anya ụbọchị mgbe anyị nwere ụfọdụ algọridim na ngwa ngwa igbe na igbe ọrụ anyị maka ịtụ mmetụta nke nghọta na imeghe!
Ruo oge ahụ, ka anyị na-ekerịta ihe anyị chọpụtara!
Robert Visser kwuru
Ajụjụ ndị a bụ n'ezie, ihe a na-atụle na ihe akụrụngwa eji arụ ọrụ - kedu ka esi ejide onye ọrụ ọ bụla. A na-enye ya na mmemme nchịkọta weebụ ga-ejide ma gosipụta okporo ụzọ ntugharị. Ndị ka mma na-enyere ndị na-eso ndị ọbịa ọ bụla akpọtụrụ aka 'pịa pịa saịtị na saịtị ahụ yana, na olile anya, itinye aka na ihe ịga nke ọma.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ n'ime ihe anyị ga-atụ anya ga-eme ka ndekọ dị mma karịa ma nye aka na ịbawanye ụba nke ọma dị ka ntinye ederede nke search engine nke backlinks adịghị na ọtụtụ CMS saịtị mgbasa ozi.
Dịka ọmụmaatụ, iwu robot izugbe bụ "ndeksi, soro", mana, akọwapụtaghị nke a na Twitter. Ọ bụrụ na anyị na-ele koodu maka RT m na-edebanye aha na ntinye blog a:
onye na-ahụ na bots na-enye ntụziaka rel = ”nofollow”. Nke a bụkwa eziokwu maka njikọ “More Info URL” na mpaghara sidewe Tweeter.
Ọzọkwa, a gwara engine nchọta ka ọ ghara ịgbaso njikọ ahụ.
Otutu maka backlinks.
Enweghị ike ikwenye karịa! Mmesho dị oke mkpa iji mee ka ụlọ ọrụ anyị nwee ọganiihu. Imirikiti mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ anaghị eme ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụ "ihe ziri ezi ịme". A na-enwekarị ụdị mkpali nke na-abara anyị uru. Nnwale na-akwado mkpali ahụ ma na-enye anyị ohere ịme ka ikike dị na ya pụta mana nghọta.
Daalụ maka pingback na edemede m gbasara Ezigbo Social Media. Ekwenyere m kpamkpam na nke a! O juru m anya na ị chọghị ịlele mgbasa ozi mmekọrịta. Iji soro ndị ahịa na-emekọrịta ihe, echere m na ọ dị mkpa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ chọrọ ịre ngwaahịa ha nye ndị chọrọ ma chọọ ha. Atụle mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ụzọ dị mma iji jikọọ ndị ahịa ma chọpụta mpaghara na ọwa ha na-eji ekwu maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa.